islam_History Archives - Page3of3- News @ M-Media
သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည်- အပိုင်း-၂ (အစ္စလာမ် က နယ်ချဲ့ဝါဒ လား? တမန်တော် မုဟမ္မဒ် နှင့် အစ္စလာမ်သာသနာ)
ရဲရင့်သစ္စာ သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည် အပိုင်း-၁ (စကားပလ္လင်-အိန္ဒိယ နှင့် အာရပ်မွတ်စ်လင်မ်) ဖတ်ရန်။ အစ္စလာမ် က နယ်ချဲ့ဝါဒ လား? (ဂ) အစ္စလာမ်ဘာသာဟာ စစ်တိုက်နယ်ချဲ့ပြီးသာသနာပြုဖို့သင်ပေး ထားတဲ့ဘာသာ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ အစ္စလာမ်ဘာသာဟာလူသားတွေကို[Read More…]
September 22, 2012 — Media To Monitor
သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည် အပိုင်း-၁ (စကားပလ္လင်-အိန္ဒိယ နှင့် အာရပ်မွတ်စ်လင်မ်)
ရဲရင့်သစ္စာ စကားပလ္လင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ“ဗုဒ္ဓဘာသာမြစ်ဖျား နှင့် သမိုင်းရှုထောင့်” လို့ အမည်ရတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထွက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီစာအုပ်ကိုရေးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ရဲ့ဘွဲ့အမည် ကတော့ ဘဒ္ဒန္တ ကောသလ္လ (စံပြ[Read More…]
September 16, 2012 — Media To Monitor